အယ်ဖိုး: IT နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကဗျာလေးတွေပါ
သြော်.... IT ခေတ်ဆိုပါလား....
မမီ မီရာနဲ့ လိုက်ဆိုသလို
2. Gtalk ကို Sign in ၀င်
မင်းနဲ့ တွေ့ ဖို့ ပြင်
But ဘယ်သူနဲ့ မှ ငါမချက်။
မင်းကငါ့ကို Block လုပ်
3. Partition တစ်ခုပဲရှိတဲ့
ငါ့နှလုံးသား HDD မှာ
မင်းနှလုံးသား HDD မှာတော့
Partition နောက်တစ်ခုနဲ့ 
4. သံယောဇဉ် မော်နီတာကနေ
5. မနက်မိုးလင်းလို. ငါ့ဦးနှောက်ကိုစ RUN လိုက်တာနဲ.
ပထမဆုံး တွေးမိတာ နင့်အကြောင်းပဲ ..
အဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ တစ်နေ.လုံး ဝင်သက်ထွက်သက်တိုင်း
နင့်နာမည်က ငါ့နှလုံးသားထဲမှာ LOOPING ပတ်နေခဲ့တယ် ..
လိုအပ်လို. ငါ့ ဦးနှောက်ကို FORMAT ချရမယ်ဆိုရင်တောင်
ငါ့နှလုံးသားထက်မှာ BACKUP လုပ်ထားပြီးသားပါ ..
Posted by Peace at 10:25 PM
ဒီ ကဗျာလေးကတော့ တကယ်မိုက်တယ်ရှင်။